किन राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र बनाउँदैछन् विप्लव ? Canada Nepal
किन राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र बनाउँदैछन् विप्लव ?
काठमाडौं - नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' पछिल्लो समय माओवादी र पूर्वमाओवादी नेताहरुसँगको भेटवार्तामा व्यस्त छन् । आइतबार विप्लवले नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनले आइतबार लेखराज भट्टको निवास पुगेर भट्टसहित टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र मणि थापासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । उनीहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
आफुले पुर्ब माओवादी नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको बारे विप्लवले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
उनले तस्बिर शेयर गर्दै लेखेका छन् - 'आजको भेटघाट पुर्ब माओवादी नेताहरु टोप ब राइमाझी, लेखराज भट्ट,मनि थापा र प्रभु शाहसँग।'
यसअघि विप्लवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ लगायतसँग भेठवार्ता गरिसकेका छन् ।
श्रावण ३, २०७८ आइतवार १९:४९:४० बजे : प्रकाशित